ဘ၀ကို ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်မည့် မေးခွန်းတစ်ခု – Gentleman Magazine
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုချင်း၊ အိမ်ထောင်ဖက်ချင်း၊ ချစ်သူချင်း၊ မိတ်ဆွေချင်း ဆက်ဆံရေးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် တိုးတက်ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးရမယ့် မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းကတော့ –
“ ဒီနေ့တစ်ရက်သာ အသက်ရှင်ခွင့်ရတော့မယ်ဆိုရင် ငါ့ ဘ၀က အရေးပါအရာရောက်ရဲ့လား ? ”ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းက တကယ်ကိုတွေးစရာတွေ အများကြီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘ၀မှာ လူတွေအများကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံကြုံကွဲဖြစ်နေကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အများစုက ဘ၀ဆိုတာ သမုဒ္ဒရာအလယ်က ရေပွက်တစ်ခုလို ခေတ္တခဏလေးပဲဆိုတာကို မေ့လျော့ပြီး ဆင်ခြင်ဉာဏ်မဲ့စွာ ပြုမူနေထိုင်ကြလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်ပဲ လူအများစုက သူတို့ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်ရာကို မလုပ်ပဲနေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ လူတိုင်းက သူတို့စိတ်နှလုံးက တောင်းဆိုချက်ကို လျစ်လျူရှုနေတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ ဂန္တ၀င်မြောက်ဖန်တီးမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ အချိန်ဆွဲပြီး လက်ငင်းအကျိုးရလဒ်တွေနောက်ကို လိုက်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနေထိုင်နေကြသူအများစုက သူတို့အမြဲတမ်းမရှင်သန်နေနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သူတို့ရှင်သန်ခွင့်ရချိန်ဟာ အကန့်အသတ်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာကို မေ့နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့နေ့တော့ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးတွေနဲ့ ကမ္ဘာမှာနေထိုင်သ၍တော့ ဘ၀ရဲ့ထူးကဲသာလွန်မှုတွေကို ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ခုနကပြောခဲ့တဲ့ မေးခွန်းကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြန်မေးကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် သင့်ဘ၀အတွက် အရေးပါတဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
အရေးပါတဲ့ဘ၀ကို ရှင်သန်ရခြင်းက ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ရခြင်းထက် အများကြီးသာလွန်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လူအများစုက ရောထွေးနေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီနေ့ဟာ သင့်ဘ၀ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေက ဘာမှအသုံးမ၀င်ဘူးဆိုတာကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ရုပ်ဝတ္ထုတွေနောက်ကို လိုက်တဲ့အခါမှာ ငွေကြေးတွေ အများကြီးရှာနိုင်တာ၊ အကောင်းစားပစ္စည်းတွေ အများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့်လည်း ထူးကဲသာလွန်တဲ့ဘ၀ကိုတော့ ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့အားလုံးက အဆင်ပြေသက်သာတဲ့ဘ၀မျိုးမှာ အကောင်းစားပစ္စည်းတွေသုံးပြီး နေထိုင်ချင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့။ သင်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကအချက်ကဘာလဲ၊ သင့်အနေနဲ့ နေ့ရက်တိုင်းမှာ အခြားသူတွေရဲ့ ဘ၀ပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်သလား၊ သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့အစည်းက သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အတွက် ကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေပြီလား၊ စိတ်ချမ်းသာပြည့်စုံမှုအပြည့်နဲ့ နေ့ရက်တိုင်းကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပြီလား၊ ဒီနေ့မှာရော နာမည်တွင်ကျန်ခဲ့တာမျိုးတစ်ခုခုကို ဖန်တီးနိုင်ပြီလား။ ဒါတွေအားလုံးကို မေ့လိုက်လို့မရပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် သင့်ကိုယ်သင် အရိုးရှင်းဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်ရုံနဲ့ ထူးခြားတဲ့ဘ၀တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းကတော့ – ဒီနေ့သာ အသက်ရှင်သန်ခွင့်ရတဲ့ နောက်ဆုံးနေဖြစ်မယ်ဆိုရင် ငါ့ ဘ၀က အရေးပါခဲ့ပြီလား ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘဝကို ပွောငျးလဲသှားစနေိုငျမညျ့ မေးခှနျးတဈခု
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ နစေ့ဉျဘဝမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှမှောပဲဖွဈဖွဈ၊ မိသားစုခငျြး၊ အိမျထောငျဖကျခငျြး၊ ခဈြသူခငျြး၊ မိတျဆှခေငျြး ဆကျဆံရေးတှမှောပဲဖွဈဖွဈ တိုးတကျပွောငျးလဲခငျြတယျဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျမေးရမယျ့ မေးခှနျးတဈခုရှိပါတယျ။ ဒီမေးခှနျးကတော့ –
“ ဒီနတေ့ဈရကျသာ အသကျရှငျခှငျ့ရတော့မယျဆိုရငျ ငါ့ ဘဝက အရေးပါအရာရောကျရဲ့လား ? ”ဆိုတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီမေးခှနျးက တကယျကိုတှေးစရာတှေ အမြားကွီးပေးနိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ဘဝမှာ လူတှအေမြားကွီးနဲ့ တှဆေုံ့ကွုံကှဲဖွဈနကွေရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့အမြားစုက ဘဝဆိုတာ သမုဒ်ဒရာအလယျက ရပှေကျတဈခုလို ခတ်ေတခဏလေးပဲဆိုတာကို မလြေ့ော့ပွီး ဆငျခွငျဉာဏျမဲ့စှာ ပွုမူနထေိုငျကွလရှေိ့ပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ပဲ လူအမြားစုက သူတို့ရဲ့ စိတျအားထကျသနျရာကို မလုပျပဲနနေကွေတာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ပဲ လူတိုငျးက သူတို့စိတျနှလုံးက တောငျးဆိုခကျြကို လဈြလြူရှုနတေတျကွတာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ပဲ ဂန်တဝငျမွောကျဖနျတီးမှုတှကေို လုပျဆောငျဖို့ အခြိနျဆှဲပွီး လကျငငျးအကြိုးရလဒျတှနေောကျကို လိုကျနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုနထေိုငျနကွေသူအမြားစုက သူတို့အမွဲတမျးမရှငျသနျနနေိုငျဘူးဆိုတာနဲ့ ကမ်ဘာပျေါမှာ သူတို့ရှငျသနျခှငျ့ရခြိနျဟာ အကနျ့အသတျနဲ့ရှိနတေယျဆိုတာကို မနေ့ကွေသူတှဖွေဈပါတယျ။
တဈနနေ့တေ့ော့ဆိုတဲ့ စိတျကူးတှနေဲ့ ကမ်ဘာမှာနထေိုငျသ၍တော့ ဘဝရဲ့ထူးကဲသာလှနျမှုတှကေို ရရှိမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ ခုနကပွောခဲ့တဲ့ မေးခှနျးကို နစေ့ဉျနတေို့ငျးပွနျမေးကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ ဒီလိုဆိုရငျ သငျ့ဘဝအတှကျ အရေးပါတဲ့ စိတျအားထကျသနျမှုတှကေို ရှာဖှတှေရှေိ့လာနိုငျပါတယျ။
အရေးပါတဲ့ဘဝကို ရှငျသနျရခွငျးက ရုပျဝတ်ထုပစ်စညျးတှေ ပိုငျဆိုငျရခွငျးထကျ အမြားကွီးသာလှနျပါတယျ။ ဒီနရောမှာ လူအမြားစုက ရောထှေးနတေတျကွပါတယျ။ တကယျလို့ ဒီနဟေ့ာ သငျ့ဘဝရဲ့နောကျဆုံးနဖွေ့ဈမယျဆိုရငျ ရုပျဝတ်ထုပစ်စညျးပိုငျဆိုငျမှုတှကေ ဘာမှအသုံးမဝငျဘူးဆိုတာကို တှပေ့ါလိမျ့မယျ။ ရုပျဝတ်ထုတှနေောကျကို လိုကျတဲ့အခါမှာ ငှကွေေးတှေ အမြားကွီးရှာနိုငျတာ၊ အကောငျးစားပစ်စညျးတှေ အမြားကွီးပိုငျဆိုငျထားပမေယျ့လညျး ထူးကဲသာလှနျတဲ့ဘဝကိုတော့ ရရှိနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။
ကြှနျတျောတို့အားလုံးက အဆငျပွသေကျသာတဲ့ဘဝမြိုးမှာ အကောငျးစားပစ်စညျးတှသေုံးပွီး နထေိုငျခငျြတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘာအရေးကွီးဆုံးလဲဆိုတာကို မမပေ့ါနဲ့။ သငျနဲ့ပတျသကျဆကျနှယျသူတှနေဲ့ ဆကျဆံရေးရဲ့အဓိကအခကျြကဘာလဲ၊ သငျ့အနနေဲ့ နရေ့ကျတိုငျးမှာ အခွားသူတှရေဲ့ ဘ၀ပွောငျးလဲသှားအောငျလုပျပေးနိုငျသလား၊ သငျ့ရဲ့စီးပှားရေးလုပျငနျး ဒါမှမဟုတျ အဖှဲ့အစညျးက သကျဆိုငျရာနယျပယျအတှကျ ကောငျးကြိုးသကျရောကျမှုတှေ ရှိနပွေီလား၊ စိတျခမျြးသာပွညျ့စုံမှုအပွညျ့နဲ့ နရေ့ကျတိုငျးကို ဖွတျသနျးနိုငျပွီလား၊ ဒီနမှေ့ာရော နာမညျတှငျကနျြခဲ့တာမြိုးတဈခုခုကို ဖနျတီးနိုငျပွီလား။ ဒါတှအေားလုံးကို မလေို့ကျလို့မရပါဘူး။
ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ကိုယျသငျ အရိုးရှငျးဆုံးမေးခှနျးတဈခုမေးလိုကျရုံနဲ့ ထူးခွားတဲ့ဘဝတဈခုကို ပိုငျဆိုငျလာနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီမေးခှနျးကတော့ – ဒီနသေ့ာ အသကျရှငျသနျခှငျ့ရတဲ့ နောကျဆုံးနဖွေဈမယျဆိုရငျ ငါ့ ဘဝက အရေးပါခဲ့ပွီလား ဆိုတာပဲဖွဈပါတယျ။
Previous: လိင်မှုဘ၀သာယာရေးအတွက် Testosterone တိုးမြင့်စေမည့် နည်းလမ်းများ
Next: ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့စံချိန်များ